Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2008
Fatiantoka lehibe ho an'ny Firenena ny vatsim-pianaran'ny Filoha Ravalomanana
2008-07-27 @ 19:58 in Kolontsaina
Hiditra tsikelikely amin'ny andian-dahatsoratra momba ny fampianarana aho ka hiainga amin'ity resaka vatsim-pianarana ity. Tsy ilay fandre fa ilay nankalazaina vao tsy ela akory izay. Ireo mpianatra nivoaka tany Etazonia tiana ho reharehan'ny mpitondra fanjakana. ABU na Abilene Christian University any Texas USA ny anaran'ny sekoly, Dipilaoma mitovy lenta amin'ny Maitrise izay ananan'ny mpianatra Malagasy anarivony maro dia maro nivoaka teto an-toerana ihany, fa tsy doctorat mba vitsy mpanana kokoa, nefa dia nandanian'ny fanjakana vola be tsy hita noanoa. Mety nahavotra mpianatra andeha mody atao hoe anjatony ihany izany... saingy izy angaha no tompon'ny fanapahan-kevitra! Ny mampahonena dia mikasa ny handefa mpianatra hafa indray ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao.
Faharoa manaraka izany, vao nahita ny tany andafy ny ankizy dia miezaka ny hiverina any na dia tsy maintsy miserana kely eto amin'ny tanàna aseho vahoaka aza... fa hiserana fotsiny. Taratra sahady fa tsy hijanona eto Madagasikara mihitsy ireo mpianatra nandaniam-bola manokana ireo. Efa voalaza an-gazety sahady fa hiverina hitodi-doha hiasa any Etazonia sahady ny mpianatra lazaina fa nahay indrindra tamin'izy ireo amin'ny volana nôvambira ho avy io. Nahoana no niantohana vatsim-pianarana izy ireo, ary ny fitondram-panjakana malagasy no niantoka azy raha tsy hiasa eto madagasikara akory? sa mbola mitohy ihany gaboraraka tamin'ny repobilika faharoa izay nampanaovina taratasy ny mpianatra hiasa folo taona eto Madagasikara raha kely indrindra, nefa dia tsy misy manatanteraka izany afa-tsy izay tena misafidy ny hijanona eto sy ny tsy afa-manoatra na dia te-hiasa any ivelany mafy aza? Fandaniam-bola hangalaran'ny olona ny manampahaizana eto an-toerana fotsiny. Raha mpianatra nianto-tena na niantohan'ny ray aman-dreniny dia zavatra hafa indray satria izay no nokendren'ny ray aman-dreniny ho azy fa raha iantohan'ny fanjakana kosa tsy rariny amiko fa karazana fanodikodinam-bola ankolaka ihany. Hevitro ihany izany fa asa ianao raha hitovy hevitra amiko na tsia.